Oge ụfọdụ Friday! Ọtụtụ mmadụ unfollow m ma ghara inwe ekele m n'ezoghi ike na-elekọta mmadụ si eme online. Ejighi m n'aka na onwere onye ekeputara m dika akparamaagwa n'ihu ọha ma ọ bụ na ọ bụghị, mana enwere ike di na nwunye na-eche. Ekwetaghị m na m bụ - mana m nwere mmasị na arụmụka m n'ịntanetị. Iwe na-ewe m ọbụna otu oge - ma m ka na-agbalị ịkwanyere echiche ndị ọzọ ùgwù.
Mmetụta dị ogologo oge nke ibi ndụ mmadụ na ụwa n'ezie ebe ejikọtara ya na onye mebere ya aghọtabeghị nke ọma. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ maka ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na Intanet dị kemgbe etiti '90s, ọ dị mma ịkọba na ọtụtụ ndị karịa mgbe ọ bụla ọzọ na-egosipụta omume ịkpa oke na-emegide mmekọrịta mmadụ na ibe ya ugbu a metụtara itinye oge dị ukwuu n'ịntanetị. Ndi Social Media Na-atụgharị Anyị na Psychopaths?
Na mgbọrọgwụ nke ọrụ m na ntanetị bụ eziokwu na m bụ onye ọha na eze na nghọta m. A na m aza ajụjụ n’ihe m na-ekwu na ntanetị maka na m tinyere aha m na foto m n’elu ya. Anaghị m eme ihe ọ bụla n'okpuru amaghị aha. Ọ bụ nkwenye m na ọtụtụ akparamaagwa akparamàgwà anyị na-ahụ n'ịntanetị bụ n'ihi na enweghị mmetụta ọ bụla ndị mmadụ na-akparị ma ọ bụ na-akparị mmadụ n'ịntanetị mgbe ha zoro n'azụ mkpuchi nke amaghị aha. Ekwetaghị m na ndị mmadụ na-ihe ọ bụla pụtara online karịa mgbe ọ bụla ha na-na ndụ n'ezie… ma ọ dị mfe na-psychopathic mgbe ị na-adịghị na-aza onwe-aza ajụjụ.